किसानलाई कुलो लाग्ने समस्या टर्याे, धमाधम पक्की नाली निर्माण - EAAWAJ (इ-आवाज)
किसानलाई कुलो लाग्ने समस्या टर्याे, धमाधम पक्की नाली निर्माण
दंगीशरण गाउँपालिका वडा न। ३ रावतगाउँका नाल्टु चौधरी उमेरले ६५ बर्षका भए । तीस बर्ष अगाडि काधँमा फरुवा बोकेर कुलो बनाउँन गएको आज जस्तो लाग्छ उनलाई तर समय फेरीएपछि अचेल पक्की नाली बनेको देख्दा अचम्ममा परेको सुनाउँछन् उनी । गाउँगाउँमा सिचाईका लागि पक्की नाली बन्दैछ यस्तो सुखको दिन आउँला जस्तो लागेको थिएन नाल्टुलाई ।
जुन गाउँ जादापनि पक्की नाली बनेको देख्छु भोट दिएर नेतालाई जिताएको आज दुई बर्ष पुग्यो । सबै पक्की बन्दैछन् । चौधरी फिस्स हास्दै भने । दंगीशरण ५ कुमलगडिका सुर्यदास चौधरी ६१ बर्षका भए । १२ बर्षको उमेरदेखि नै उनी खेती किसानी भए । ‘बर्खा आउँने बित्तीकै फरुवा लीएर कुलो लाग्न जानुपथ्र्यो अव पक्की नाली बन्दैछ कुलो लाग्ने समस्याबाट मुक्ती पाईने भयो’– चौधरीले भने । दंगीशरण ५ का सुर्यदास चौधरी ६१ वर्षका भए । उनी १२ बर्षको उमेरदेखी नै खेती किसानीमा लागे । ‘बर्खा लाग्ने वित्तीकै कुलो झार्न जान्थ्यो । गाउँ देखी टोलटोलमा कुलो लाग्नु पथ्र्यौ अहिले पनि कुलो लाग्न जानुपर्छ तर धेरै ठाउँमा पक्की कुलो बनेको छ । अली कम जानुपर्छ ।’ –चौधरीले भने । दंगीशरण ४ मौलीका मित्रलाल रावल उमेरले ७५ बर्ष काटे गाउँपालीका नजीकै बनेको नाली हेर्दै हिडीरहेका थिए । ‘छोरा नातीहरुका दुखका दिन गए ।’ ६० बर्ष अगाडिको दुख सम्झदै उनले भने । ‘हामी त फरुवा कुटो कोदालो हातले चलाएर काम ग¥यो फरुवा लीएर कुलो झार्न जान्थ्यो, खेत खन्थ्यो अहिले सबै बाटाहरु, कुलो नाली पक्की बन्दैछन् । सुखका दिन आउँदैछन् ।’ रावलले भने ।
दंगीशरण वडा न. ५ मिरौलीमा कुलो निर्माणमा हेकुलीका सिता चौधरी र रवीता चौधरी काम गरिरेहका थिए । उनीहरु दैनीक ९ घण्टा काम गर्छन । ठेकदारले ८ घण्टा काम गर्ने भनेपनि कुलो निर्माण छिट्टै सकिएला भनेर उनीहरु ९ घण्टा काम गरेको बताउँछन् । पक्की कुलो बनाउँने काम छिटै सकिएपछि बर्खा लाग्दा कुलो लाग्नुपर्दैन हामीलाई रविताले भनिन् ।
प्रदेशको १ करोड ६५ लाखमा कुलो निर्माण
दंगीशरण गाउँपालिका वडा न. ३ स्थित हेकुली गाउँलाई सिचाई सुबिधाका लागि पक्की कुलो निर्माण कार्य जारी छ । प्रदेश सरकारका १ करोड ६५ लाखको लागतमा पक्की कुलो निर्माण कार्य भईरहेको छ । ३ हजार ३३ सय मिटर लम्बाई को पक्की कुलो निर्माण पछि हेकुली गाउँका करीव डेढ सय घरधुरी सिचाई सुबिधा लिन सक्नेछन् । निर्माणाधिन पक्की कुलो ८० सेन्टिमिटर चौडाई र ६० मिटर अग्लो रहेको ठेकदार ईश्वर पुनले बताए । २०७६ माघमा जलजला निर्माण सेवा घोराहि दाङसंग २०७७ माघमा निर्माण गरीसक्नेगरी सम्झौता गरेपनि यहि अशाढ मसान्तमा निर्माण कार्य सकिने सिचाई डिभीजन कार्यालय तुल्सीपुरका प्रमुख गणेश मरासीनीले जानकारी दिए ।
दंगीशरणमा २०७४/०७५ मा ५ वटा पक्की कुलो निर्माण भएका छन् भने २०७५र०७६ मा १० वटा गरी जम्मा १५ वटा पक्की कुलो निर्माण भएको दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले जानकारी दिए । यस आर्थीक बर्षमा पनि गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा पक्की कुलो बन्ने प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।
← कोरोना बाट सजग हुन विपद व्यवस्थापन समितीको आग्रह
क्रिकेटका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित →